March 2021 - Araniko Times
बलिउडका पाँच धनाड्य अभिनेत्रीको वार्षिक आम्दानी सुन्दा परिन्छ चकित
काठमाण्डौ – सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, बलिउडका अभिनेता–अ’भिनेत्रीहरु लग्जरी जीवन बाँच्छन् ।उनीहरुको जीवनशैली देखेर सबैलाई आश्चर्य लाग्नु स्वभाविकै हो ।फिल्म उद्योगका केही लोकप्रिय अ’नुहारहरुले सफलताको शिखर चुमे भने कोहि फ्लप पनि भए ।तर फ्लप भएका केही कलाकारको आम्दानी थाहा पाउँदा समेत मानिसहरु आश्चर्यमा पर्छन् ।आज हामी केही त्यस्ता अभिनेत्रीहरुको बारेमा चर्चा गर्दै छौं, जसको […]
सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलाइएका प्रमुख अतिथि नै निदाएपछि के होला? यस्तै एक घटना भएको छ । रिपोर्टस् नेपालको २३ औं बार्षिक उत्सव चलिरहको थियो । त्यहाँ धेरै दलका नेताहरु बोलाइएका थिए । प्रधानमन्त्री देखि अन्य दलका नेताहरु समेत उपस्थित थिए । सांसद कोमल वली मञ्चमा आसिन थिइन् । उनको छेउमै थिए सुचना तथा सञ्चार मन्त्री पार्वत […]
कुनैबेला नेपाली भाषामा वर्षभरी एउटा फिल्म बन्न पनि मुस्किल थियो । फिल्मी क्षेत्रमा करिअर बनाएर कहाँ पुगिन्छ भन्ने टुङ्गो थिएन । यो क्षेत्रमा भविष्य खोज्नु नै मुर्खता मानिन्थ्यो । त्यही अन्यौलका बीच फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरेका राजेश हमालको फिल्म यात्राले ३३ वर्ष पूरा गरेको छ । यात्रा यति लामो होला भन्ने उनले कल्पनासम्म पनि गरेका […]
शव व्यवस्थापन गर्ने म्याग्दीकी सपनालाई गत मंसिर ८ गते बीबीसीले विश्वका १०० प्रभावशाली महिलाको सूचीमा सामेल गरेको थियो. यो सफलतामा उनी अत्यन्त खुसी थिइन्। तर, उनलाई पढाइ छुटेकोमा उनलाई छटपटी थियो। २०७३ सालमा महेन्द्ररत्न उच्च माध्यामिक विद्यालयबाट एसएलसी पास गरेकी सपना सदरमुकाम म्याग्दी गएर व्यवस्थापन विषयमा कक्षा ११ मा भर्ना भएकी थिइन्। तर, त्यसपछि उनले […]
मिति २०७७ साल चैत १८ गते बुधबार, हेर्नुहाेस तपाईहरूको राशि अनुसारको भाग्यफल यस प्रकार रहेको छ। तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्। माता पाथिभराको कृपाले हामी सबैकाे दिन सुखद वितोस् । जय माँ पाथिभारकि! मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ भाइबहिनी वा सन्ततिका समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्ने छ, सन्ततिका लागि केही धनराशि खर्च […]
एजेन्सी । सौता भन्ने शब्द महिलाहरुलाई पटक्कै मन नपर्ने शब्द हो । महिलाहरु विबाहपछि घरमा धेरै दुःख सहेर बसेका उदाहरणहरु छन् । महिलाहरु निकै सहनशील हुन्छन् तर विवाहित महिलाले सहनै नसक्ने कुरा हो – सौता । उनीहरु अरु धेरै कुरा सहन सक्छन् तर आफ्नो श्रीमानलाई अरु कसैसँग बाँड्न पटक्कै तयार हुँदैनन् । तर एक २२ […]
एकै गाउँका तीन युवक एकै ट्र्याक्टरमा काम गर्थे। चैत ५ गते दिनभर खोलाकिनारमा ढुंगा, बालुवाको काम गरे। साँझ ट्र्याक्टरमा चालकलाई बीच पारी दायाँ–बायाँ दुई सहचालक बसे। उनीहरू ढुंगा, बालुवा भरिएको ट्र्याक्टर लिएर गल्याङ नगरपालिका–८ बग्रान्तीतर्फ लागे। ट्र्याक्टर गुडिरहेकै बेला एक सहचालक १९ वर्षे गणेश गाहा भुइँमा खसेर घाइते भए। त्यसपछि चालकले ट्र्याक्टर फर्काए। घाइते अवस्थामा […]
हरेक मान्छेलाई सुन्दर देखिने मन हुन्छ । अनुहारको छालालाई सौन्दर्यको प्र’तिक मानिन्छ । अनुहारको छाला चम्किलो बनाउन धेरैले धे’रैथरीका उपाय अ’पनाउँने गरेका छन् । सुन्दर देखिन थुप्रै खर्च गर्ने मानिस पनि थुप्रै छन् ।जीवन सुन्दर फूल हो। यो फूललाई कसरी सजाउने, हु’र्काउने र बढाउने भन्ने आफैंमा भरपर्छ। मानिस स्वभावैले आफूलाई सुन्दर देखाउन चाहन्छ। यही चाहनाअनुरुप […]
शसस्त्र प्रहरीका जवानले घरमा साथी भनेर ल्याएकी महिला आफ्नै सौता परेपछि….
काठमाडौ । तनहुँ व्यास नगरपालिकाकी अनिता थापा । उमेर २९ वर्ष मात्र छ । तर यिनको जिवनमा परेको दुख भने सागर भन्दा ठूलो छ । जिम्मेवारी पनि सगरमाथा जत्रै छ । आज भन्दा १२ वर्ष पहिले जसलाई उनले जिवनसाथी रोजेकी थिइन् ति पुरुषले नै आज धरधरी रुवाउलान् भन्ने कल्पना पनि गरेकी थिइनन् । गाउँकै पुर्णवहादुर […]